IsiXhobo soMbane se-ONRUN (Huzhou) Co., Ltd.
Molo apho, singu-Onrun, sasekwa ngo-2012 ngonyaka, singabakwa-Hangzhou Onrun Electric Appliance Co., Ltd, esele isebenza kwiindawo zefriji iminyaka engaphezu kwe-8, ngoku, sinabasebenzi abangaphezu kwamakhulu kunye ne-10000m2 ivelisa ucweyo.
Siyimveliso yobuchwephesha yokubonisa iikhabhathi ezivela eChina, sinokubonelela ngesisombululo esilungileyo kwiimfuno zakho zesikhenkcisi, ungalibazisi ukunxibelelana nathi.Sikulindile!
Sinecandelo lamandla ophando kunye nophuhliso, ngokusekwe kwiimfuno zakho, nika izisombululo ezilungileyo.
Sonke sinemigca yokuvelisa enye yokumisa, njengemigca yemveliso yentsimbi, umgca wokuhlanganisa kwangaphambili (dibanisa iphepha lesinyithi kunye nogwebu), imigca yendibano (icompressor, condenser, fans njalo njalo), imigca yokuhlola (igesi evuzayo, ukujonga umbane, ukupholisa umthamo wokuhlolwa ect.) imigca yokupakisha.lonke uyilo kunye nemveliso iphantsi kolawulo lwethu, yiyo loo nto sinokunika izinto ezisemgangathweni ngexabiso elikhuphisanayo.
Sinamaqela athengisayo abalaseleyo kwaye emva kokuba amaqela athengisayo asebenza nawe ngalo lonke ixesha, anokunika impendulo ekhawulezileyo kwimibuzo yakho kunye nenkonzo elungileyo ngexesha lentsebenziswano yakho.
Sinoluhlu olubanzi lwezinto, iindidi zibonisa i-cooler, i-freezer yokubonisa njalo njalo, umthamo ukusuka kwi-20L ukuya kwi-400L, ubushushu ukusuka -30C ukuya kwi-55C, kwaye sobabini sinokukunika uyilo olukhethekileyo njengemfuno zakho.njengepeyinti yobuso obuhlanu, uyilo lwelogo ye-3D, umboniso okhokelwayo wophawu njalo njalo.
Ukwandisa ukuthengisa kwakho ngeendlela zethu ezizodwa, ezipholileyo zokubonisa, sikulindile!
Imibono eKhawulezayo Yeyethu
Ukusukela oko sasungula i-2012 iminyaka
Usapho lwethu ngabantu be-100
Ivenkile yomsebenzi 10000m2
Iimveliso imigca 5
Ukuqhuba kwisikhululo seenqwelomoya saseshanghai pudong iiyure ezi-2
Iindawo ezithengisayo eYurophu, kuMntla Melika, eMzantsi Melika, eAsia
Umthamo wemveliso Ngaphezulu kweeseti ze-10000
Ixabiso lokuthengisa lonyaka
Idatha yobugcisa inokukuxelela, asingomagama athengisayo kuphela
Sinokuba noyilo lwamehlo okubambisa wena, imodeli, umbala, uphawu zonke zisekwe kwisitayile sakho.
Ezinye izimvo ezilungileyo zabathengi zibonisa Fumana uluhlu lwequato